प्रकृतिले विभेद देखेन ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
प्रकृतिले विभेद देखेन !
२०७७ बैशाख ६ गते शनिवार
विश्वकर्माले उज्यालो टाइम्समा मानवअधिकार र दलित अधिकारका बिषयमा कमल चलाउछन्।कोरोना महामारी विज्ञानको आविष्कार हो । यस्को समाधान विज्ञानले मात्र निकाल्न सक्छ । पूरा विश्व आज कोरोना जस्तो जानलेवा बिरामीबाट युद्धस्तरमा लड्दै छन् । एक न एक दिन अवश्य यस्को औषधि र टिकाकरण आउन्छ । तबसम्म हामीले धैर्यधारण गर्नुछ । हामी सबै बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले अलपत्रमा परेका छौं । तपाईंहरु रोजगारी गर्न आएकालाई अलि दोबर ज्याला छ तर हामी पहिलेदेखि यता बसेका छौं भनेर अलि राहत छ त्योपनि घर हुनाले ।
हाम्रोपनि हालत हजुर जस्तो नै छ । शायद यस्तै रह्यो भने हामीले पनि अवश्य बाटोमा आउनुपर्छ । आज यस्तो विकट परिस्थितिमा हामीले चाहेको सहयोग गर्न गाह्रो देखिरहेका छौं । भारत सरकारले लाकडाउन गरेपछि सके सहयोग गरेको छ तर निकायहरूले सकेसम्म सहयोग पु¥याउन सकेको छैनन् । जनताले बन्दाबन्दीको कडक तरिकाले पालना गरेको देखिएको छैन । कयौं जना पैदल गाउँतिर जाने गरेका छन् । यो तरिकाले हामी आफै बढी मात्रमा अलपत्र पर्दैछौं । कोरोनाको भाईरस नेपाल पु¥याउन गरिरहेका छौं ।
जसले हाम्रो गाउँघर संक्रमित हुन् सक्छ । परिवारमा संक्रमण सर्न सक्छ । कोरोना महामारीको यस विकट समयमा नेपाल सरकार अनि नेपाली दूतावास मौन भएको पनि हामीले हेरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौला प्रत्यारोपण गरेर ६ महिनाको लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा छन् । यतिबेला विश्व कोरोनाले बन्दाबन्दी छ । सत्ताका यति लोभ छन कि कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिएको छैन । नेपाल दूतावासलाई स्वतन्त्र पदभार दिएको छ, कि नेपालबाट हस्तक्षेप हुन्छ थाहै छैन । भारत सरकारले पनि गज्जब गरेको छ यस्तो महामारीमा रामायण सिरियल देखाउने गरेको छ । कतै रामायण सिरियल हेरेर कोरोनाको रोकथाम हुनेछ ? बरु देखाए कृषि सम्बन्धि जानकारी दिए हुन्थियो । विज्ञान सम्बन्धित जानकारी पु¥याए हुन्थियो ? जनता हेर्थेन केही कुरो सिक्ने गर्थेन ।
हामीलाई चाहेको लुई पाश्चर जस्तो वैज्ञानिक जस्ले रेबिज संक्रमणबाट बाँच्ने औषधि बनाएन । न्युटन जस्ता वैज्ञानिक जस्ले गुरुत्वाकर्षणको खोज गरे । सर अलेक्सजेन्डर फ्लेमिङ्ग पेनिसिलिन औषधीका जनक, सर विलियम हार्वे रगत परिक्षण तकनिकीको खोज, राबर्ट कोख बेक्टेरिया इन्फेक्सनको खोज, विलिहम कोनरैड रोन्टजन एक्सरे आविष्कार गरेछन् यिनीहरूहरुको प्रसंशा गरे आजका वैज्ञानिक प्रोत्साहित हुन्थिये । भारतिय आयुर्वेदऔषधिका जनक ऋषि चरक, ऋषि पतन्जली, सुश्रुत, धन्वन्तरी आदि ईत्यादी… अहिले आको आपदामा कोरोनाबाट बाँच्ने औषधि र टिकाकरण बनाउने वैज्ञानिक हुन् यिनीहरुको खोजको प्रसंशा हुनुपर्नेमा अलग्गै अन्धबिश्वास हेर्दा मन दुखित छ ।
कोरोना महामारीमा सबै देविदेवताले मन्दिर बन्द गरेन । अल्लाहको मस्जिद बन्द भयो । जिसस चर्चमा झुन्डिएका छन् । बुद्ध गुम्बामा शान्त मुद्रामा छन् । विश्वका सबै वैज्ञानिक, सरकारी निकाय ठप्प परेको देखिरहेका छौं । प्रकृतिले सबै संग समान न्याय गरिरहेको छ । कोरोनाले सबैलाई अछुतो बनाए । यस्तोमा आफू बाँचौ अरुलाई बचाउँ भन्ने भावनासहित फिल्डमा खटिएका सबै जागरुक जनताको दायित्वलाई आदर सहित सम्मान र सलाम छ ।